uMlahlankosi | eNanda Online
by eNanda in Amasiko & Amagugu
Nhlolokonono noThokozile Vilakazi (eNanda- Africa) 16 March 2013
uThomas uthula isihloko no Gogo Thokozile
Thomas: Sawubona Gogo
Umbuzo: Bengisacela uzethule noma uzazise.
Impendulo: Igama lami nginguThokozile Vilakazi.
Umbuzo: Kuyi ntokozo ukukwazi, bengisacela usichazela ngolwazi onalo ngesihlahla esibizwa ngokuthi umlahlankosi.
Impendulo: ngolwazi lwami enginalo ngalesihlahla ukuthi uma kunomuntu oshonile noma komuphi umdeni ,kuye kuthathwe ihlahla esihlahleni base kuyolandwa umoya waloyomuntu ubuyiswe ekhaya. Futhi liyasetshenziswa uma kungiselelwa umsebenzi wokugezwa.
Umbuzo: Sisetshenziselwa lokho kuphela isihlala?
Impendulo: Yebo! Ngolwazi enginalo ilokho kuphela.
Umbuzo: Uma sikhula sibasikhulu kangakanani?
Impendulo: Asikhuli kakhulu sibangangale yambali (eyikhomba).
Umbuzo: Kumuntu ongasazi engakwazi ukusibona uma edlula emgwaqeni? Ungasitshela ukuthi ame kanjani amahlamvu aso, sinazo yini izimbali, njalo njalo…..
Impendulo: Kwiyisihlahla esincanyana esingakhuli sibe side futhi asiqhakazisi izimbali sinamahlamvu aluhlaza.
Umbuzo: Unalo ulwazi ukuthi indaba kwakhethwa lesisihlahla ukuthi senze lomsebenzi?
Impendulo: Anginalo ulwazi olugcwele kodwa abantu abadala babona ukuthi kube isonasihlalala esilungele ukwenza lomsebenzi ingakho sibizwa ngomlahlankosi.
Umbuzo: Sisetshenziswa uma sekunjani, ungasilandisa indlela elandelwayo?
Impendulo: Uma kubuyiswa umoya womuntu ekhaya kumele kube nesilwane esizohlatshwa; imbuzi, ngaphambi kokuthi sihlatshwe isilwane, kumele silindwe esangweni size sibuye nehlala bese siyakhuluma nomoya walomuntu simchazele ukuthi sesifikile ekhaya besesiyangena sonke nesilwane siqonda emsamo.
Umbuzo: Uma kusetshenziswa lesihlahla okuphi okumele kwenziwe nokumele kungenziwa? Isibonelo ungakwazi ukusebenzisa isihlahla ukubasa umlilo?
Impendulo: Cha, angikhumbuli sisetshenziselwa ukubasa umlilo
Umbuzo: Ungakwazi ukuthi usitshale njengembali noma isihlala ekhaya?
Impendulo: Yebo, ungakwazi
Umbuzo: Lokho kuchaza ukuthi angeke ukwazi ukusisebenzisa ngaphandle kwesilwane nempepho?
Impendulo: Kuyenzeka ungabinazo lezi ezinye izinto, uyakwazi ukusisebenzisa. Kukhona esekengababona besisebenzisa sodwa.
Umbuzo: Uma usuka kulomuzi ohlala kuwona uyakomunye kwenzakalani?
Impendulo: Asithi imina esengadlula emhlabeni bomuntu owangiletha ekhaya kumele futhi kube uyena ozokhuluma name asho ukuthi sesiyahamba manje siya ekhaya,elisha kumele angakhulumi namuntu endleleni size sifike lapho siyakhona. Uma sifika lapho esimakhona kumele angazise noma sesisuka.
Umbuzo: Uma senifika lapho eniya khona kwenzakalani ngehlahla?
Impendulo: Kumele ulihlome phambi komnyango lapho kungena khona abantu
Umbuzo: Uma kwenzeka usuka futhi kwenzakalani usebenzisa lona lelohlahla noma usebenzisa elisha?
Impendulo: Uma ihlahla selomile ngalendlela le kumele kusetshenziswe elinye.Kodwa umuntu lona uyazi ukuthi usekhaya lapho manje
Umbuzo: Kuthiwa umuntu wesimame akanalo ilungelo lokushisa impepho akhulume namadlozi ngabe naloyomthetho ume kanjalo uma kusetshenziswa umlahlankosi?
Impendulo: Ngokwami uma kushona mina kuyomele umzukulu wami ayocela isihlobo noma umalume kube uyena obuyisa umoya wami ekhaya.Kodwa kuyomele ahambe naye umalume babuyise umoya wami ekhaya
Umbuzo: Lokho kuchaza ukuthi asisetshenziswa abantu besimame?
Impendulo: Ngolwami ulwazi yebongobanasemsamoumuntuwesimameakakhulumi
Umbuzo: Ngabe lesihlahla siyaketha?Isibonelo mhlawumbe kubantu abadala kuphela hayi ezinganeni?
Impendulo: Anginalo ulwazi olugcwele ngiyacabanga sisetshenziswa nanoma kubani.Kumele usisebenzise nanoma ubani, siyasetshenziswa
Umbuzo: Kumuntu oshone ngengozi yemoto, kumele uye kuleyondawo ashonele kuyona?
Impendulo: Yebo kumele uye kuleyondawo okwenzeke khona ulande umoya waloyo muntu, asithi ushayiswa imoto lana eAfrica mase ephuthunyiswa esibhedlela e Mahatma Ghandi bese ushonela khona, njengobe umphefumulo wakhe ukhumbula ase Africa kumele ukuthi uye la ekwenzeke khona ingozi bese uye esibhedlela umlande khona usubuya ekhaya.
Umbuzo: Uma umuntu eshonela empini bese singayazi kahle indawo ashonele kuyona, kwenziwa njani entweni ekanjalo?
Impendulo: Uma ungayazi indawo lapho eshonele khona ayikho inkinga kuyiwa lapho impi ibiyenzeka khona uthathe ihahla ufike umbize ngegama uma ekuzwa unwele lakho lizokuma bese ukhuluma naye umbuyise ekhaya.
Umbuzo: Njengoba sisebenzisa ama- ambulance uma umuntu egula kulesikhathi samanje, uma i- ambulance iyolanda umuntu ogulayo, ithi isasendleleni eyaesibhedlela avele ashone,ihlahla uliphatha uyenalo esibhedlela noma uliphatha uyenalo lapho umuntu ashonele khona?
Impendundulo: Uma wabona indawo lapho kwaphumela khona umpefumulo wakhe uzoyakhona kuqala bese uya esibhedlela noma uqale esibhedlela ugcine lapho kwaphuma khona umpefumulo.
Ukuthola ulwazi oluphelele cofa enye yalama “links” angezansi:
The Umphafa or Umlahlankosi tree
Traditional Zulu practices for deceased persons